Miyuu Goolkii Alexis Sanchez Ahaa Gool Sharci Ah? Garsoore Hore Graham Poll Ayaa Si Cad U Sharaxay. - Wargane News
Home Sports Miyuu Goolkii Alexis Sanchez Ahaa Gool Sharci Ah? Garsoore Hore Graham Poll...
Alexis Sanchez ayaa Arsenal u dhaliyay gool muran badan abuuray isla markaana ay kooxda Chelsea iyo jamaahiirta kooxdeedu ka cadhoodeen iyada oo xidiga ree Chile lagu eedeeyay in uu gacanta ku qaatay kubbada intii uu ku jiray diyaarinta goolkii uu hogaanka ugu dhiibay Gunners, haddaba miyuu sharci ahaa goolkani?.
Waxaa sharaxaad ka bixiyay garsoorihii hore ee Graham Poll oo wax ku qora wargayska Daily Mail wuxuuna si fiican u sharaxay qaabkii ay wax udhaceen iyo sida uu goolkii Sanchez ku noqday mid sharci ah oo aan la diidin.
Garsoore hore Graham Poll ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Anthony Taylor si fiican ayuu isku dajiyay inkasta oo uu si aan fiicnayn ku bilawday finalkii FA Cupka. wuxuuna saxay go’aankii ugu horeeyay ee ugu waynaa. Arsenal ayaa mamulaysay boosishanka isla markaana daqiiqadii 4 aad waxay kubbadu ku soo dhacday Alexis Sanchez waxayna uga timid madixii uu David Luiz iskaga saarayay”.
Garsoore hore Graham Poll ayaa hadalkiisa sii raaciyay: ” Waxay kubbadu u muuqatay in ay ku dhacday gacantiisa fidsanayd laakiin ciyaarta ayaa sii socotay iyada oo kubbadu ku soo dhacday xerada ganaaxa oo uu joogay Aaron Ramsey kaas oo si cad ugu jiray offsideka. Caawiyaha garsooraha ee Gary Beswick ayaa si deg deg ah calanka u taagay, isagu (Ramsey) waxa uu xaqiijistay in uu offside ku jiray wuxuuna u baneeyay si uu Sanchez goolka u dhaliyo”.
Graham Poll oo sharaxaadiisa sii wata ayaa yidhi: ” Taylor si degan ayuu u sugay wuxuuna u tagay Beswick kaas oo uu luuqada jidh ahaantiisu muujinaysay in uu gartay in uu qalad sameeyay, kadib wada hadal gaaban waxaa lagu abaal mariyay goolka”.
Garsoore hore Poll ayaa arinta laba xaaladood u kala saraaray wuxuuna yidhi:” Marka laga eego dhinaca offsideka, go’aanku waxa uu ahaa mid sax ah maadaama oo aanu Ramsey kubbada taaban ama aanu qasin kooxda ka soo horjeeday. Waxa aan gabagada lahayn ayaa ah haddii uu Sanchez kubbada gacanta kula tacaalay dhismihii hore , wuxuuna ahaa bilaw xiiso leh oo finalka FA Cupka ah”.
Wargane TV: Hoggaanka KULMIYE oo Dalka kusoo Dhaweeyey Siyaasi Ibraahim Xaaji Cabdi oo Dibadda Kasoo Laabtay